မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး ကျပ်တည်းမှုတွေကို ထောက်ပြလာကြတာ များတယ်…. ဒါဖြင့် သူများနိုင်ငံတွေမှာလို Micro Financing အသေးစား ငွေချေးလုပ်ငန်း မရှိဘူးလားဆိုရင် Micro Financing တွေ မြန်မာပြည်မှာ ရှိတယ်၊ လုပ်လည်း လုပ်နေတယ်… UN ကလည်း ကမကထ လုပ်ပေးတယ်…. သိသလောက်လည်း PACT Myanmar တို့ ဘာတို့ ရှိတယ်…. ချေးငွေ ဆပ်တဲ့စနစ်က ၀ိုင်းကြီးချုပ်လို လုပ်ထားတယ်…. ဥပမာ အားဖြင့် လူ ၅ ယောက်တစ်စု ဖွဲ့လိုက်တယ်…. အဲ့အစုထဲက တစ်ယောက်ကို ပိုက်ဆံချေးတယ်….. အဲ့တစ်ယောက် မှန်မှန်ပြန်ဆပ်လို့ ကျေရင် နောက်တစ်ယောက်ကို ချေးတယ်……. အချင်းချင်း ပြန်ချုပ်တဲ့ စနစ်ပေါ့…….. ပိုက်ဆံချေးတဲ့လူ ပြန်မဆပ်ရင်တော့ အဲ့ဒိလူစုက ကျန်တဲ့လူတွေ စုဖွဲ့ပြန်လျော်ရတယ်……
This entry was posted in စီးပွားရေး, မြန်မာသတင်း, News and tagged ချေးငွေ, ဆောင်းပါး, မြန်မာသတင်းများ, မြန်မာနောက်ဆုံးသတင်းများ, မြန်မာ့အသေးစားချေးငွေ, Micro Finance and Myanmar, Micro Financing, Myanmar Update News on February 4, 2013 by koshwehtoo.
← မန်းလေး ဆေးကျောင်းက ကျောင်းသား လေးရာကျော် ကျောင်းထုတ် ခံရတဲ့ကိစ္စ ပြောပြန်ရင်လည်း လွန်တော့မယ် (၁) →